စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှာကပ်ထားတဲ့ "စာ" ၊ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) ပေးစာနှင့် ဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ထွန်းတို့ ပြောသောစကားများ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
April 22, 2008, 1:33 am
စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိမြန်မာများထံသို့ “ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း” ဆန္ဒမဲပေးရန်အတွက် အကြောင်းကြားစာများကို စာတိုက်မှတဆင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်လျှက်ရှိပါတယ်။
ထိုသို့မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် လာမည့် ၂၅ရက် သောကြာနေ့တွင် စတင်ပြုလုပ်မည့် ဆန္ဒခံယူပွဲ အကြိုမဲပေးပွဲ မစတင်ခင် မဲဆန္ဒရှင်များ သိသင့်သိထိုက်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဆန္ဒခံယူပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ပေးထားသော “မဲရုံမှူးလမ်းညွန်” စသည့် ပြည်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ မရှင်းလင်းသေးသော အချက်အလက်များကို မြန်မာသံရုံးမှ ဦးဆောင်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလိုလားသူများမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒမဲပေးရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို သံအမတ်ကြီးအား လေးစားစွာဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းလိုကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း” ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိမြန်မာများ သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် ရှင်းလင်းပြောကြားပေးရန် စင်္ကာပူနိုင်ငံသံရုံးရှိ ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်း အား တာဝန်ပေးအပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သံရုံး နံရံပေါ်မှာ ကပ်ထားတဲ့စာ၊ ဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ထွန်းပြောကြားခဲ့သော စကားများတို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ကာ စာတိုက်မှတဆင့် ဖိတ်ကြားခဲ့သော “အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန် ဖိတ်ကြားခြင်း” စာပါအရ ကလည်း ယခုလိုဆိုပြန်ပါသေးတယ်။
အထက်ပါစာအပိုဒ်(၂)အရ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) ဟု လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ဖိတ်ကြားစာမှ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ယနေ့ သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ထွန်း ပြောကြားခဲ့သောစကားများနှင့် သံရုံးနံရံမှာ ကပ်ထားသေား စာများ အားလုံးရဲ့  အဓိပ္ပာယ်တို့မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မှ ပြဌာန်းလိုက်သော “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ အမှတ် (၁/၂၀၀၈)” တို့နှင့် လုံးဝအဓိပ္ပာယ်များ ရောထွေးနေပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသောကြောင့် မဲဆန္ဒပေးလိုသူအများစုကိုေ၀၀ါးစေပါတယ် ထို့ကြောင့်မြန်မာသံရုံးမှ လာမည့် (၂၅)ရက် သောကြာနေ့မတိုင်ခင် အချိန်မှီ ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကို လေးစားစွာဖြင့် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မွေးရာပါအခွင့်အရေးအရ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူများအားလုံး ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရရှိနိုင်ရပါမည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း” ဆန္ဒမဲပေးရေးအတွက် သံမှူး ဦးကျော်ဆွေတင့်စာပါ စာပိုဒ်(၂)အရ “မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ⁄ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုင်ဆောင်၍” လို့ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားဆိုရာမှာ “မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ကဒ်ပြား၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော PR ကဒ်ပြား၊ EP ကဒ်ပြား S Pass ကဒ်ပြား၊ Work-Permit ကဒ်ပြားများ၊ Student pass၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်” အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အလုံ သက်သေဖြစ်သောကြောင့် အားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုယ်စား ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာသံရုံးမှ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် အသက်လောက်အရေးကြီးတဲ့ “အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန်” ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားသူ စင်ကာပူသူ တရုတ်လူမျိုး အမျိုးသမီးမှ မဲဘယ်လို ဘယ်ပုံ ထည့်ရမည် ဆိုတဲ့ မဲရုံလမ်းညွန်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အင်္ဂလ်ိပ်စကားနှင့်ရှင်းလင်း နေခြင်းကို သံအမတ်ကြီး အနေနှင့် မသင့်တော်ပါကြောင်းကို အလျဉ်းသင့်တုန်း လေးစားစွာဖြင့် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုသမားဆိုသည်မှာ နအဖ အပြစ်ကို တစ်ခုမကျန်ပြောသလောက် သူတို့၏ ယုတ်မာမှုများကိုမှု တစ်ခုမှကျန်ဖုံးကွယ်ထား၏ ။ ထို့ကြောင့် ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲသူများဟု သိအပ်၏
I’m the commander — see, I don’t need to explain — I do not need to explain why I say things. That’s the interesting thing about being president.
Comment by * In Search of Truth * April 23, 2008 @ 12:38 pm